Mpanamboatra fanivanana an-dakozia sy fandroana - Mpamatsy sivana an-dakozia sy fidiovana any Sina
5687/5688 3-Stage eo ambanin'ny Sink Sintim-pianakaviana Reverse Osmosis System
Ny rafitra patanty ASO dia afaka mifanaraka amin'ny tahan'ny rano amin'ny fahatapahan'ny herinaratra.
Ny maodely 75GPD dia miaraka amin'ny fitoeran-drano 3GPD.
5262 3-Stage eo ambanin'ny Sink Domest Reverse Osmosis System
Ny cartridge sivana 2 amin'ny 1 dia mamonjy ny habaka ao anaty milentika ary mora ny manolo singa.
5264 3-Stage eo ambany rafitra milomano miverimberina amin'ny Osmosis
Ity rafitra osmosis miverimberina kely ity dia mampihena ny solo-dronono rehetra voaroaka ao anaty rano miaraka amin'ny tahan'ny famonoana olona mihoatra ny 90%.
Ny rafitra dia miaraka amina endrika tsy misy tanky nefa tsy mila toerana malalaka. 5,51 santimetatra monja ny sakany, tsy mila toerana malalaka eo ambanin'ilay fatana lakozia.
Ny famolavolana tsy misy tanky dia miantoka famatsian-drano tsy tapaka, olan'ny fandotoana faharoa izay hita fa voavaha ny rano nentin-drazana RO!
Faucet marani-tsaina miaraka amin'ny fampisehoana maivana dia azo jerena amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano sy ny toetran'ny sivana.
5265 2-Stage eo ambany rafitra milentika mifamadika amin'ny Osmosis
Ny rafitra dia miaraka amina endrika tsy misy tanky nefa tsy mila toerana malalaka. 5,1 santimetatra monja ny sakany, tsy mila toerana malalaka eo ambanin'ilay lakozia ao an-dakozia.
5267 Eo ambany rafitra milentika mifamadika amin'ny Osmosis
Ny rafitra dia misy singa 4-in-1 cartridge sivana tsy misy toerana fanampiny. 5,9 santimetatra monja ny sakany, tsy mila toerana malalaka eo ambanin'ny fitoeran-dakozia.
5268 2-Stage eo ambany rafitra milomano miverimberina amin'ny Osmosis
Manala hatramin'ny 99,99% metaly mavesatra, solo-bolo (TDS), bakteria, sns.
Tonga miaraka amin'ny famaritana telo hisafidianana: 400G, 600G ary 800G. Safidio ny marina araky ny fanjifanao rano.
Manasongadina ny membrane RO tsara indrindra izay mety haharitra mandritra ny 3 taona, miaraka amin'ny Toray sy Dow.
Manome fanamasinana fiara tsy tapaka amin'ny ankapobeny izay manasa ny loto manangona ary mitandrina ny membrane ho madio.
Ny mari-pamantarana ny androm-piainana dia azo ampiasaina hanairana anao ny herin'ny bateria.
5214 3-Dingana eo ambanin'ny Sink trano fonenana ultrafiltration rafitra fitsaboana rano
Ity famolavolana tsy misy tanky ity dia 4,72 santimetatra ihany ny sakany, izay manampy amin'ny fitsitsiana toerana eo amin'ny latabatra na eo ambanin'ny filentehana.
Ny famolavolana mifono sy tsara tarehy dia mifanaraka amin'ny fomba ao an-trano rehetra ary tehirizo tsara ny toerana misy anao.
Ny fotony dia mifikitra mafy amina kaopy suction hametrahana latabatra na kaontera, manome fitoniana mba tsy hivezivezy mandritra ny fampiasana azy.
Ny sarom-pivoahana dia azo soloina 360 ° hahazoana malalaka ny rano.
Fanadiovan-drano ho an'ny trano iray manontolo, Rafitra fanivanana rano Osmosis tsara indrindra, Rafitra Osmosis miverimberina amin'ny trano feno, Cartridge fanoloana rano, Sivanin'ny rano ao an-trano, Fitaovana fitsaboana rano,